सुशान्त सिंह राजपुतलाई डि’प्रेसनमा पुर्याउन सलमानसहित यि ७ जनाको हात छ ! – Jagaran Nepal
सुशान्त सिंह राजपुतलाई डि’प्रेसनमा पुर्याउन सलमानसहित यि ७ जनाको हात छ !
काठमाडौ । रोजी-रोजी, नयाँ-नयाँ नायिकाहरुलाई बलिउडमा भित्र्याउन माहिर सलमान खान निकै चुजी कलाकार हुन् । पछिल्लो समय उनी निर्माता भएसँगै उनलाई ग्रुपिजम गरेको आरोप लागीरहेको छ ।
आँफुलाई मन परेका कलाकारहरु मात्रै लिन सलमानले सुशान्त सिंह राजपूतलाई त्यति नरुचाएको हालैको एक रिर्पोटले रहस्य खोलेको छ । छोटो समयमा राम्रो सफलता हाँसिल गरेका सुशान्तलाई बलिउडका शीर्ष मानिने ७ निर्माताहरुले आफ्नो चलचित्रमा नखेलाउने भनेर घोषणा नै गरेको रिर्पोट बाहिर आएको र यो कुरा सुशान्तले ६ महिना अघि थाहा पाएको उक्त रिर्पोटमा उल्लेख छ ।